Vasculitis - isifo okuyinto lihlotshaniswa ukuvuvukala ezindongeni semithambo. nezimbangela zayo zingase zihluke, lesi sifo uyakwazi hit yegazi izinhlobo ezahlukene nosayizi. Ngakho-ke vasculitis - ejwayelekile igama iqembu yizifo ezihlobene nokungabikho imithambo yegazi:
Arteritis - ukuvuvukala ezindongeni Umthambo.
Kapillyarity - ukuvuvukala ezindongeni capillary.
Arteriolity - ukuvuvukala arteriole (kwemithambo emincane).
Phlebitis - ukuvuvukala ezindongeni emthanjeni.
Kukhona vasculitis letindzala. Lokhu ukunqoba noma yiluphi uhlobo lomkhumbi izindonga.
Ukuze siqonde ukuthi sibangela lesisifo, umuntu kufanele aqale ukuqonda umehluko phakathi isifo ezenzeka ngokwayo (vasculitis okuyinhloko), kanye nezifo semithambo, okuyinto is phetho kwenye ukugula. vasculitis Primary - isifo, izimbangela zezinkumbulo lapho imithi bengayiqondi ngokugcwele. Ukuvela vasculitis yesibili kungabangela lezi zinto ezilandelayo:
Kunezinhlobo ezihlukahlukene izifo oyingozi noma ezingamahlalakhona of omsakazo ezibangelwa amagciwane kanye ezibangelwa amagciwane.
impendulo eyodwa yomzimba abanye abantu ukuba agonywe.
Xhumana ne izinto elimazayo, asetshenziselwa ukwelapha izifo ezithile (umdlavuza nabanye).
Imiphumela emzimbeni izinto ezihlukahlukene zamakhemikhali.
okweqile Strong emzimbeni.
izimo isikhathi eside aphansi-lokushisa, isb undercooling eqinile.
Burns (kuhlanganise welanga).
Noma yimuphi lezi zici kungabangela isifo, okubangela ushintsho antigenic isakhiwo semithambo kwezicubu. Bebonke, umphumela labo lithuthuka. Umzimba iphendula le inyumbazane. Useqala cabanga amaseli sakhe semithambo njengoba lezinto angaphandle futhi ukukhiqiza namasosha omzimba alwa nabo. isikhumba vasculitis kubangelwa ukusabela okuhlukahlukene nomzimba. Segmental nezifo ehunyushelwe kwenzeka ngenxa uxhumane ne odongeni semithambo we izinto ezithwala izifo. Kukhona oluhambisana vasculitis. Izimpawu kunzima ngempela ukuxilonga. Kuyinto nezifo ezingamahlala khona ekuqaleni okuyinto senziwa ezihlukahlukene izifo, ukuvuvukala ezindongeni semithambo kodwa bunohlamvu aseptic (ngaphandle ukutheleleka).
In iziguli vasculitis letindzala, waphawula nezimpawu ezifanayo. Lesi sifo iqala enomkhuhlane ngesikhathi lapho izinga lokushisa lomzimba ke ngezikhathi kwandisa kunciphe. Izinkathi abalulekile lokushisa kuyanda zivumelana ukubukeka ukuvuvukala entsha semithambo. Izimpawu vasculitis nazo izibazi esikhumbeni. Kamuva ukopha kungathinta amalunga, imisipha kanye izitho zangaphakathi. Lokho umzimba ziyokhinyabezeka, okuya ngokuthi yikuphi imithambo yegazi zithonywa isifo. Uma lesi sifo liyavela ngemuva arthritis, owokuqala kokuba izimpawu ezivamile nokuvuvukala, futhi cishe ngemva kwenyanga kakade wabonakaliswa vasculitis. Uma sithinta emalungeni waphawula ubuhlungu bamalunga nesifo sokuqaqamba kwamalunga. vasculitis lefundo ngokuvamile elinesimo ndima eside nge inchubekelembili njalo, exacerbations gqwa. Yokutakula umhlahlo incike lapho izitho zithonywa isifo futhi inkulu kangakanani izinguquko ezenzeke kubo.
Anatomy of the vertebrae wesibeletho, isakhiwo kanye umsebenzi
Indlela yokubiza umfana ngothando.